खस क्षेत्रीसँगै आर्य र अन्य सबैको हित गरौं | छलफल
“संयुक्त खस क्षेत्री समाज” नेपाल खस क्षेत्री समुदाय र हामीजस्तै बहिष्करणमा परेको अर्को जात ब्राम्हणलाई भएको अन्याय र विभेदको अन्त्य गर्ने नितान्त स्वतन्त्र संगठन हो । यसले अन्यायमा परेका ब्राम्हण, क्षेत्री, ठकुरी, गिरी, दशनामीहरूलाई अधिकार दिलाउनका लागि
माग राख्ने, दबाब सिर्जना गर्ने, आन्दोलन गर्ने, त्यसका लागि सबै विचार समूह र अन्य सबैलाई समेटर एकीकृत गरेको स्वतन्त्र शक्तिको मूल प्रवाहयुक्त संगठन हो । यहाँ पार्टीका गतिविधि र विचारहरू हुँदैनन् यो हामीले प्रष्ट भनेका छांै, त्यहीअनुसार गरेका पनि छांै ।
महासचिवजी अहिले के के काम गर्दै हुनुहुन्छ ?
संयुक्त खस क्षेत्री नेपालको महासचिवको हैसियतले नेपालको संविधानले विभेद गरेको आरक्षणको कोटा या त हटाउनु पर्ने या त वास्तविक आदिवासीहरू खस, क्षेत्री र आर्यलाई संविधान संशोधनमार्फत संविधानमा राखिएको अन्य हटाई आदिवासीमा सूचीकृत गर्नुपर्ने, राज्यले दिने हरेक सेवा सुविधामा अरूसरह आरक्षणको कोटा दिनुपर्ने भन्ने माग पूरा गराउन लाग्ने, टोल सुधार समितिको अध्यक्ष र नेकपाको पूर्वनगरकमिटीको उपाध्यक्षको नाताले नगरका जनताका समस्या समाधान गर्ने, विकास निर्माणका काम गर्ने, पार्टीले लगाए अह्राएका काम गर्ने, संगठन विस्तार गर्ने, विन्दवासीनी टोल सुधार समितिको अध्यक्षको नाताले टोलका सामाजिक काम गर्ने, राष्ट्रिय अभिभावक संघको केन्द्रीय सदस्यको नाताले आमअभिभावकको हित र चासोका काम गर्ने, विन्दवासिनी मन्दिर संरक्षण समितिको अध्यक्षको नाताले त्यो मन्दिरको संरक्षण र सम्वद्र्धन गरी धर्म संस्कृतिको विकास गर्ने र सामुदायिक प्रहरी साझेदारी कार्यक्रमको नगर सदस्यको नाताले बिनाबर्दीको प्रहरी भएर नगरको शान्ति सुरक्षामा नगर प्रहरीलाई सहयोग गर्नेलगायत आफ्ना निजी कामहरूमा व्यस्त रहने गरेको छु ।
पार्टी सम्पूर्ण रूपले एक भइसकेको छैन, तपाईंंहरूलाई जिम्मेवारी नै तोकिएको छैन पार्टी कमिटीका काम कसरी गरिरहनुभएको छ त ?
हो अहिले दुईवटा पार्टी एक भएका छन् तर एकताका सम्पूर्ण काम सम्पन्न भएका छैनन्, केन्द्रीय सचिवालय, केन्द्रीय कमिटी, प्रदेश कमिटी, जिल्ला संयोजक सहसंयोजक, इञ्चार्ज सहइञ्चार्ज, जनवर्गीय संगठनका इञ्चार्ज र सहइञ्चार्ज तोक्ने काम भएको छ तर सम्पूर्ण कमिटी फर्मेसन हुन सकेको छैन, विभागहरू बन्न सकेका छैन, अर्थात एकताका बाँकी काम पूरा हुनसकेका छैनन् । त्यसैगरी तल्ला कमिटीहरू बनिसकेका छैनन्, थुप्रै नेता कार्यकर्ताहरू जिम्मेवारीविहीन भएका छन् तर पार्टीका सबै संरचना बन्ने तयारीमा छन्, यहाँ पनि बन्छ नै यद्यपि, म पूर्वनगरकमिटी उपाध्यक्ष भएर काम गरिसकेको हुनाले र पहिले पनि विभिन्न भूमिकामा, समाजसेवीको रूपमा जनताका दुःख सुखमा समाजसेवाका काम गरिरहेको हुनाले अहिले पनि बिनापद, बिनाजिम्मेवारी त्यसैगरी हिजोकै रूपमा सक्रियताका साथ काम गरिरहेको छु । इच्छाशक्ति भए जनताका काम गर्न पद चाहिँदैन भन्ने मेरो मान्यता छ ।
यहाँको पार्टी संगठन कसरी चलिरहेको छ त ?
यो चाँगुनारायण नगरपालिकामा ९ वटा वडाहरू छन् । यहाँ सबै वडामा हाम्रो पार्टीको संगठन राम्रो छ । यो नगरपालिकामा मेयर उपमेयरलगायत हाम्रो बहुमत छ । संगठन विस्तारमा पनि हामी राम्रैसँगले खटिरहेका छौं, विस्तार पनि भइरहेकै छ । तत्काल हाम्रो पार्टीको एकताको काम पूरा भइनसकेकोले तत्काल सदस्यता वितरण नभए पनि हामी जनतालाई बुझाउने, पार्टी प्रवेश गराउने काममा लागि नै रहेका छौं । म दावाका साथ भन्छु हामी यो नगरपालिकामा आउने निर्वाचनमा पनि संघ, प्रदेशसहित ९ वटै वडामा जित्ने छांै, तीनै तहका सरकार बनाउने छौं । यसैको आलोकमा पार्टीलाई सशक्त बनाउने छौं । यहाँ हामीले त्यो ढंगले सबै काम गरिरहेका छांै ।
तपाईं २०५४ सालमै एमालेबाट गाविस अध्यक्षमा निर्वाचित भएर काम गरी सक्नुभएको छ । जनताका समस्या सबै थाहा छ, समस्याचाहिँ के छन नि ?
हो, मलाई पार्टीले २०५४ सालमा दुवाकोट गाविसको अध्यक्षमा प्रत्यासी बनाएको थियो तर तत्कालीन अवस्थामा हाम्रो पार्टीको सांगठानिक अवस्था कमजोर भएको हुनाले मैले थोरै मतले पराजित हुनु परे पनि केही वडा हामीले जितेका थियौं । हामीले हारे पनि जनतासँगको सम्बन्ध राम्रो बनाएका कारण हामीले त्यसपछिका निर्वाचनमा सफलता हात पार्दै गएका छौं । यहाँका जनताको मूल समस्या सडक, बिजुली, पानी, ढल, फोहोरमैला र भट्टाको व्यवस्थापन, जग्गासम्बन्धी काम, मठमन्दिरको संरक्षण, रोजगारी, शिक्षा र स्वास्थ्यको सुधार, प्रभावकारी सेवा प्रवाहलगायत भौतिक पूर्वाधार निर्माणका काम मुख्य समस्या हुन् ।
यो कसरी पूरा होला त ?
यो सरकार बनेकै जनताका यिनै काम पूरा गर्नका लागि हो । हाम्रो एकलौटी पाँचवर्षे बलियो सरकार बनेको हुनाले यी सबै काम क्रमिक रूपमा सम्पन्न हुन थालेका छन्, हुँदै जान्छन् । यसमा ढुक्क रहन र सरकारका हरेक कामलाई साथ दिन म जनतामा आग्रह गर्न चाहन्छु ।
तपाईं संयुक्त खस क्षेत्री नेपालको महासचिव पनि हुनुहुन्छ, यसको किन आवश्यकता प¥यो, यो संस्थामा रहेर अहिले के गर्दै हुनुहुन्छ बताइदिनुस् न ।
समग्र खस क्षेत्री समुदायको एकीकरणका निम्ति सबै क्षेत्रीहरूका संगठनलाई एकीकरण गरेर २०६९ साल पौष २८ गते यो संगठनको स्थापना भएको हो । म स्थापनाकालदेखि विभिन्न पदीय हैसियतमा काम गर्दै गत साल पुस १६ गतेबाट यो पदीय मर्यादामा छु । नेपालको अन्तरिम संविधान २०६३ ले इतिहासको उषाकालदेखि मुलुकका विभिन्न भूभागमा बसोवास गर्दै आएका राष्ट्र र राष्ट्रियताका लागि जीवन बलिदान गर्ने आधा करोडभन्दा बढी संख्यामा रहेका खस क्षेत्री समुुदायमाथि गरेको संवैधानिक विभेदविरुद्ध र खस क्षेत्री समुदायको ऐतिहासिक पहिचान, अस्तित्व रक्षा तथा आत्मसम्मानका साथ जीवन बिताउन पाउने अधिकार प्राप्तिको लागि विभिन्न थर भएका क्षेत्री समुदायहरू तथा तिनीहरूका संघ संस्था एक आपसमा आबद्ध भई पारस्पारिक सहयोग अभिवृद्धि गरी क्षेत्री समुदायको उत्पत्ति विकासक्रम, धर्म संस्कृति, रीति रिवाजसमेतको अध्ययन अनुुसन्धान गन, गरिबी र पछौटेपन हटाउने उद्देश्य र आवश्यकताले यो संगठनको स्थापना भएको हो । यो संगठनमा रहेर मलगायत हाम्रो संगठनले हाम्रो समुदायलाई संविधानसभाको निर्वाचन समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीअन्तर्गत अन्यको सूचीमा राखी राज्यको पुनर्संरचना र नयाँ संविधान निर्माणको अवसरबाट वञ्चित गरी दोश्रो दर्जाको नागरिकजस्तो व्यवहार गरेकोले समग्र खस क्षेत्री जातिलाई अन्यको सूचीबाट हटाई संविधानमै बेग्लै आदिवासीको सूचीमा सूचीकृत गर्न पहलकदमी लिने र आईएलओ १६९ अन्तर्गत १४२ बुँदामा समेटिएका हक अधिकार प्राप्त गर्ने, सुरुमा हाम्रो संगठनले लिएको घोषित माग पूरा गराउने कार्यमा संठनको विधान र परिधिभित्र रहेर सबैको सल्लाह सुझावअनुसार आफूले सकेको र संगठनले लगाएको काम गरिरहेको छु । यही सन्दर्भमा देशभरिका खस क्षेत्रीहरूका गाउँबस्तीका जाने उहाँहरूका समस्याको पहिचाहन गर्ने, सिखलगायत आर्य समुदायलाई पनि यो अभियानमा समेट्ने जस्ता काम गरिरहेको छु, गरिरहेका छौं ।
यो संगठन कस्तो प्रकृतिको हो ?
यो खस क्षेत्री समुदाय र हामीजस्तै बहिष्करणमा परेको अर्को जात ब्राम्हणलाई भएको अन्याय र विभेदको अन्त्य गर्ने नितान्त स्वतन्त्र संगठन हो । यसले अन्यायमा परेका ब्राम्हण, क्षेत्री, ठकुरी, गिरी, दशनामीहरूलाई अधिकार दिलाउनका लागि माग राख्ने, दबाब सिर्जना गर्ने, आन्दोलन गर्ने, त्यसका लागि सबै विचार समूह र अन्य सबैलाई समेटर एकीकृत गरेको स्वतन्त्र शक्तिको मूल प्रवाहयुक्त संगठन हो । यहाँ पार्टीका गतिविधि र विचारहरू हुँदैनन् यो हामीले प्रष्ट भनेका छांै, त्यहीअनुसार गरेका पनि छांै ।
मताधिकारका विचारहरू त होलान् यहाँ स्वतन्त्र रहन सक्नुहोला त ?
सकिन्छ, हामी राजनीतिक प्राणी त हौं तर हामी राजनीति गर्ने स्थान अन्तै छ । हामी त्यहाँ गएर राजनीति गर्छौ तर यहाँ हामी नितान्त संसारभर रहेका खस क्षेत्रीहरूको हित र अधिकारका काम गर्छौं । यहाँभित्र कुनै दर्शन, इज्म र वाद हुँदैन । क्षेत्रीको नाममा यहाँ अन्य गतिविधि हुँदैनन् तर क्षेत्रीको हक, हित र अधिकारका लागि खोलिएका जुनसुकै संघसंस्था वा संगठलाई एकीकृत गर्ने उसका मुद्धा बोक्ने काम हामी गर्छौं ।
त्यसो गर्दा तपाईंहरूलाई पार्टीले समस्या पार्दैन ?
पार्दैन, हामी त्यहाँ रहँदा पार्टीका हितविपरीतका गतिविधि कोहि गर्दैनांै, बरू देश, जनता र सबै पार्टीहरूलाई नै फाइदा पुग्ने र पार्टीले गर्नुपर्ने नै काम गर्छौं । हामी के कुरामा सचेत छौं भने हामी यो स्वतन्त्र संस्थालाई राजनीतिमा जोड्दैनौं, पार्टीमा बसेर स्वतन्त्र संस्थाको अहित हुने, संस्थालाई जोड्ने काम गर्दैनौ, जातीय सद्भाव खल्बल्याउने खालका कुनै गतिविधि गर्दैनौं । यहाँभित्र राजनीतिक रंग आउन दिँदैनौं अर्थात हामी राजनीति गर्न पार्टीमा जान्छौं समग्र क्षेत्री र आर्यको हित गर्न यो संस्थामा आउँछौ र काम गर्छौं । यहाँभित्र हामी सबै विचारका मान्छे छौं तर भित्र विचारको द्वन्द्व, विचारको बहस हुन दिँदैनौं । यी दुवैमा हाम्रो फरक फरक भूमिका हुन्छ । यसर्थ हामीलाई कुनै समस्या पर्दैन ।
संगठन कसरी सञ्चालन गर्नुहुन्छ, आर्थिक कहाँबाट जुट्छ ?
सबै खस क्षेत्री हाम्रा सदस्य हुन्, हामी उनीहरूलाई सदस्य बनाउँछांै, त्यसमा पनि एक घर एक सदस्यको नीति बनाएका छांै र उनीहरूसँग सामान्य सदस्यता शुल्क लिन्छौं । केही भैपरी आउने समस्यामा कार्यसमितिको बैठक बसेर पदाधिकारी र सदस्यबाट अतिरिक्त शुल्क उठाउँछौ । हाम्रो आर्थिक श्रोत यही हो । हामी कसैसँग चन्दा माग्दैनौं, कसैलाई जबर्जस्ती गर्दैनौं, कुनै विदेशी संस्थासँग पनि चन्दा माग्दैनौं । सबैलाई समेट्छांै, सबैको सहयोगले यो संगठन अगाडि बढाउँदै छौ ।
यसबाहेक तपाईंले कुन कुन क्षत्रमा रहेर काम गर्नुभयो ?
नेपाल सरकारको राष्ट्रिय क्षयरोग केन्द्रमा १६ वर्ष काम गरेँ । त्यहाँबाट उपदानमा निस्किएर राजनीतिमा लागेँ । पूर्णकालीन कार्यकर्ता भएर राजनीति गरेँ, २०५४ सालमा तत्कालीन नेकपा एमालेबाट टिकट पाएर गाविस अध्यक्षमा चुनाव लडेँ । त्यहाँदेखि अहिलेसम्म म नेकपाको कार्यकर्ताको भूमिकामा विभिन्न पदमा रहेर काम गरिरहेको छु । त्यसबाहेक सामाजिक काममा पनि लागिरहेको छु । त्यसअन्तर्गत लकाई खड्का कुल देवता मन्दिर संरक्षण समितिको अध्यक्ष छु । त्यहाँ मेरै सक्रियतामा कुल देवताको मन्दिरसमेत निर्माण गरेका छौं । त्यसैगरी नेपाल अभिभावक संघको केन्द्रीय सदस्य र जिल्ला समन्वय समितिअन्तर्गत एउटा इकाई छ, त्यसको राष्ट्रिय पढाइ कार्यक्रमको जिल्ला सदस्य पनि भएकोले शैक्षिक संस्थामा भएका विकृति विसंगतिका विरुद्ध पनि मैले थुप्रै काम गरेको छु, सुधारका काम गरेको छु । लागू औषधविरुद्धको राष्ट्रिय अभियान समितिको जिल्ला सदस्य र प्रहरी साझेदारी अभियान नेपालको नगरकमिटी सदस्य रहेर सामाजिक हिंसा, घरेलु हिसाविरुद्ध काम गरिरहेको छु । यिनै संघ संस्थामार्फत म जनताका घरघरमा गएर काम गरिरहेको छु, गरिरहने छु ।
स्थानीय जनप्रतिनिधिले त जनताका हितमा भन्दा ठेक्कापट्टामा,कमिसनमा बढ्ता ध्यान दिन थालेको, आँफै डोजर किनेर आफैँलाई ठेक्का पारेर ऐनविपरीत काम गरिरहेका छन् भन्छन् नि हो ?
यो कुरा धेरै हदसम्म सत्य हो । आंशिकले यसो नगर्लान् तर अधिकांशले यसो गर्न थालेको, आफू र पार्टीलाई बदनाम गर्न थालेको देखिन थालेको छ । तपाईंहरूकै मिडियामा देखिन थालेको छ, यो दुःखदायी विषय हो । यसमा सरकारको कडा निगरानी र नियन्त्रण हुनु जरुरी छ । यसो भएन भने पार्टीका नेता कार्यकर्ताले त दुःख पाउँछन्, पाउँछन् सिंगो मुलुकका जनताले दुःख पाउँछन् । यसमा सचेतता अपनाउनु पर्छ । यसको अन्त्य गर्न हिजोको कम्युनिस्ट आचरणको विकास गर्नुपर्छ । त्यसका लािग प्रशिक्षण दिनुपर्छ, पार्टी नेतृत्वले पार्टीको विधि विधानमा रहेर कडाईका साथ पार्टी नेता कार्यकर्तालाई हिँडाउनु पर्छ । पार्टीबाट निर्वाचित जनप्रतिनिधिलाई पार्टीले लगाम लगाउनुपर्छ, अनुशासनमा राख्नुपर्छ, पदीय आचरणविपरीत आर्थिक चलखेलमा लाग्न दिनु हुँदैन । पार्टीलाई पनि विधि विधानमा सञ्चालन गर्नुपर्छ, गुटको अन्त्य गर्नुपर्छ । अवसरको वितरण प्रणाली बलियो र विधिसम्मत बनाउनुपर्छ । राम्रो गर्नेलाई पुरस्कार र नराम्रो गर्नेलाई कडा दण्डको नीति कडाईका साथ कार्यान्वयन गर्नुपर्छ । ठूलालाई चैन, सानालाई ऐन हुनुहुँदैन । यसो भयो भने सबै कुरा ठीक ठाउँमा आउँछ अनि ‘समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली’ को ऐतिहासिक अभियान बल्ल पूरा हुन्छ । यो अभियानमा नेकपाका सबै नेता कार्यकर्ता, राष्ट्रसेवक कर्मचारी र जनता लागौं । यिनै भनाइ राख्दै मेरा विचारहरू जनतासम्म पु¥याउने लोकप्रिय सञ्चार संस्था छलफल साप्ताहिक र यसको सम्पादन मण्डलको टिमलाई हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छु ।